Shiinaha Madow silikoon dunta khafiifka ah ee gacanta loo tuuro oo leh talooyin hufan Soo-saar iyo Warshad | MOLONG
Mashiinka madow ee silikoon madow oo la tuuro oo leh talooyin hufan
Madoow Silicone La tuuro Tattoo oo leh caarad cad
Cabbirka / xirxirida
16mm 40pcs / sanduuq
19mm 30pcs / sanduuq
25mm 20pcs / sanduuq
30mm 15pcs / sanduuq
(1). Tubbooyinka Farsamaysan ee Tattoo-ga cusub waxay soo bandhigaan qaab-dhismeedka ergonomic, qaabaysan, curvy tub ah oo aan ka siiban doonin ama ka siibanaynin hareeraha tubbada inta la shaqaynayo.
(2) .Tatoo tuubo la tuuro oo leh caarad cusub, cabirka caarada saxda ah waxay siinaysaa farshaxanno farshaxan farshaxan jilicsan.
(3) .Tattoo Tayada Sare Waxsoosaarka tuubada tuubada iyo xirxirida.Khariidad kasta oo khariidad leh si shaqsi ah ayaa loo shaabadeeyey, loona sii daaweyn karaa gaaska EO.
(4) .waxay ka wada samaysan yihiin caag caafimaad oo waa la nadiifiyay si hal mar loo isticmaalo
(5) .Waan sameyn karnaa amar-dalbasho, waxaa ka mid ah midab xajin ah, ku dar sanduuqaaga astaantaada iyo wixii la mid ah.
Qabashada La Tuuri Karo - 100% Naqshadeynta Asalka ah ee MOLONG, qabashada hal-abuurka leh oo leh naqshad wax ku ool ah, farshaxan jilicsan iyo muuqaal cusub, oo caan ku ah farshaxanada tattoo adduunka oo dhan. Xirmo Farxad leh: Finanka ay ka buuxaan mashiinka wax lagu xiro ee otomaatigga ah ee ugu horumarsan, goynta geeska si looga fogaado inaad naftaada ku dhaawacdo fin dusha afaysan. Xirxirid tayo sare leh gudaha iyo dibaddaba si loo ilaaliyo xajinta habka maraakiibta. Sahay fara badan: 10 000 kumbiyuutar maalintiiba, 300 000 kumbiyuutar bishiiba sidii caadiga ahayd, saacadaha dheeraadka ahi way ka badan karaan haddii loo baahdo.
Waxaan nahay soo saare xirfadlayaal ah saadka tattoo. Waxaan leenahay warshad noo gaar ah, shaqaaluhuna waa koox iibiya xirfadlayaal iyo khubaro cilmi baaris & horumarineed. Waxaan soo saari karnaa mashiinada tattoo, qabashada, talooyinka, korontada, square bedelka, xargaha goynta, cirbadaha sawirka iyo waxyaabaha kale ee lagu qurxiyo. Waxaan u heellannahay inaan soo saarno alaab iyo adeeg tayo sare leh. Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyaa adduunka oo dhan iyadoo lagu saleynayo sicirka tartanka, adeegyada wanaagsan iyo soo dejinta degdegga ah. Waad hubsan kartaa inaad ku heleyso alaabada tayada ugu fiican iyo tikniyoolajiyadda horumarsan haddii aad doorato alaabtayada.
Ujeedadayadu waa inaan horumarino xiriiro waqti dheer ah oo aan la yeelano macaamiisheenna. Si loo gaaro hadafkan, waxaan si joogto ah u siineynaa macaamiisheena jira alaabooyin cusub iyo naqshado casri ah. Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah alaabtayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah. Waxaan rajeyneynaa inaan noqdo saaxiibkaaga ganacsi mustaqbalka dhow.
Hore: Ahama Steel Cag Beddelka Tattoo Pedal
Xiga: Qalabka Qalinka Tattoo Tattoo oo tayo wanaagsan oo aan laheyn Aluminium Kiis TZ-008
Tattoo Ink Cups Supply Professional Joogtada ah T ...
Tayada ugu Wanaagsan ee 2.4m Copper Silicone Tatto ...
Multifunctional wareejin Haydarooliga hagaajin t ...